निखिललाई मैले बाँधेकी छैन |
निखिललाई मैले बाँधेकी छैन
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यतिबेला नायक निखिल उप्रेती तथा नायिका सञ्चिता लुइँटेलको विवाहको खबरले निकै चर्चा पाएको छ। डेढ वर्षअघि विवाह गरेको भनिए पनि एक महिनाअघि मात्र मुम्बई आएर सँगै बसिरहेका निखिल र सञ्चिताले आफूहरूले विवाह गरेको स्वीकारेका छन्। दिनरात सुटिङमा व्यस्त रहने निखिल उप्रेतीले मुम्बईमा रेस्ट गरेर दुई किलो वजन बढाएका छन् भने नायिका सञ्चिता लुइँटेल बलिउडमै जम्ने तर्खरमा छिन्। मुम्बईमा वार्तालाप:
निखिल उप्रेतीसँग पहिलो भेट कहाँ र कसरी भएको थियो ?
झन्डै सात वर्षअघि चलचित्र भन्नै सकिनको सुटिङका लागि पोखरा गएकी थिएँ । उहाँको पनि त्यहीं अर्को चलचित्रको सुटिङ थियो । निखिलजी आफैं आएर मसँग कुरा गर्नुभयो । त्यतिबेला भर्खर मेरो विवाह भएको थियो र उहाँको पनि । हामी दुवैले एक-अर्कालाई दाम्पत्य जीवनको सफलताका लागि शुभकामना पनि दिएका थियौं । त्यसपछि चलचित्र ‘चोर-सिपाही’ को छायांकनका क्रममा हामी सँगै थियौं र एक-अर्कालाई चिन्ने-जान्ने मौका पायौं । त्यसपछि हामीले ७ वटा चलचित्रमा सँगै काम गर्‍यौ । यसबीचमा कहिलेकाहीं निखिलजी मेरो वैवााहिक सम्बन्ध कस्तो चलेको छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । म आफ्नो सम्बन्धका बारेमा भन्थें, तर उहाँसँग त्यही सोध्दा केही पनि जवाफ पाउँदिनथे । त्यसको तीन वर्षपछि निखिलजीले प्रपोज गर्नुभयो । मैले त्यति बेला केहि भन्न सकिनँ । त्यसको जानकारी मैले आफ्नो परिवार र निखिलजीको गाउँमा परिवारलाई पनि दिएकी थिए । मेरो बुबाले मलाई तिमी आफैं विचार गर, तिम्रो लाइफ हो भन्नुभएको थियो । ६ महिनापछि मात्र मैले ओके भनेकी थिए । त्यसपछि हामी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गयो ।
तपाईंहरूले विवाह कहिले गर्नुभयो ?
झन्डै डेढ वर्षपहिले हामीले काठमाडौंकै एक मन्दिरमा गएर विवाह गरेका हौं ।
कुन मन्दिरमा ?
विवाह गरेको डेढ वर्षसम्म पनि किनसँगै नबस्नुभएको त ?
हामीले विवाह गरेको मेरो परिवार र निखिलको परिवारलाई थाहा भए पनि अरूलाई थाहा थिएन, तर पनि हामी डेढ वर्षदेखि सँगै खाने, हिँड्ने र समय बिताउने गथ्र्यौं । दुवैको व्यस्तताले गर्दा हामी श्रीमान-श्रीमतीका रूपमा सँगै बस्न सकेका थिएनौं । असल मित्रकै रूपमा आ-आफ्नो काम गरिरहेका थियौं ।
अनि अहिले एक्कासि कसरी मुम्बईंमा सँगै बस्न आउनुभयो त ?
म आफ्नै कामको सिलसिलामा -साथीको इन्गेजमेन्टका लागि) मुम्बई आएकी थिएँ । हामीबीच पूर्वसल्लाह पनि भएको थिएन । म आएपछि निखिलजी आफैंले फोन गरेर म मुम्बई आउँछु भन्नुभयो । त्यति बेला मैले यहाँ फ्ल्याट लिइसकेकी थिएँ । निखिलजी लगातारको सुटिङले गर्दा बिरामी हुनुहुन्थ्यो । जुन कुरा मैले साथीहरूबाट थाहा पाएकी थिएँ । उहाँ अहिले पनि बिरामी हुनुहुन्छ । यहाँ आएपछि साइन गरेको भोजपुरी चलचित्र पनि छोडिदिनुभएको छ ।
अहिले दिनहरू कसरी कटिरहेका छन् ?
म अहिले आफ्नो हिन्दी र मराठी भाषा राम्रो होस् भनेर यी दुवै भाषाको कक्षा लिइरहेकी छु । साथमा विभिन्न ठाउँमा अडिसन पनि दिइरहेकी छु । निखिलजी
-दैनिक कार्य पूजा, मेडिटेसन र जगिङबाहेक) आराम गरिरहनुभएको छ । दिनरात सुटिङमा खट्ने मानिस आराम गर्न पाएपछि उहाँको दुई किलो वजन पनि बढेको छ ।
तपाईंहरूको विवाहको खबरले नेपाली चलचित्र बजार निकै
तातेको छ नि ?
धेरै तिरबाट धेरै कुरा आइरहेका छन् । विशेष गरी नराम्रा कुरा केही मिडियामा आएकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ । हिजोसम्म निखिल र सञ्चिताको जोडी मिलेको छ, डे्रस पनि म्याच हुन्छ भन्नेहरू नै आज हाम्रा विरुद्धमा छन् । सबैको आ-आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । कसैले कसैलाई मन पराउनु नराम्रो होइन । निखिलजी सीधा हुनुहुन्छ र कम बोल्नुहुन्छ । म उहाँलाई जिस्क्याएर भोलाजी पनि भन्छु । हामी एक-अर्कालाई माया गछार्ंै । लामो मित्रतापछि हाम्रो सम्बन्ध विवाहमा परिणत भएको हो ।
तपाईंहरूको सम्बन्धका बारेमा विभिन्न कुरा आइरहेका छन नि ?
सञ्चिताले निखिललाई मुम्बई लगी भन्नेहरू पनि छन् । निखिलजी ३३ वर्षको हुनुहुन्छ र म २७ वर्षकी । हामी आफ्ना बारेमा राम्रोसँग सोच्न र जान्न सक्छौं । हिजोसम्म हामी सँगै खाँदा-बस्दा र हिँड्दा वास्ता नगर्नेहरू आज किन विरोधमा ? हिजोसम्म दिनरात पेनकिलर खाएर भोकै सुटिङ गर्दा चिन्ता नलिनेहरूलाई आज किन निखिलको चिन्ता ? यही कुरा पहिले भएको भए हुथ्यो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको चर्चित नायक जसले ९० भन्दा चलचित्र खेलिसक्यो, ४० लाखको गाडीमा घुम्थ्योे, ऊ अहिले आममानिसको जीवन जिउनुमा पनि त केही कारण होला । त्यसका पछाडि के कारण छ, किन कसैले बुझ्दैनन् ? अहिले पनि निखिललाई मैले बाँधेर राखेकी छैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्र, मिडिया, घर-परिवार सबैले लान सक्नुहुन्छ । उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । हाम्रो विवाहपछि हामीलाई निकै मानसिक दबाब परेको छ । निखिल र सञ्चितालाई मार्छौं भन्नेसम्मको कुरा आएको छ । यदि मैले केही गल्ती गरेको भए म कानुनी रूपमा त्यसको सजाय भोग्न तयार छु । त्यसैले यस्तो यातना नदिन पनि म सबैसँग आग्रह गर्छु ।
तपाईंहरूको भावी योजना ?
यही बलिउडमै केही गर्नेछांै र सँगै जीवन बिताउनेछांै ।
अब नेपाली चलचित्रमा अभिनय नगर्ने ?
हैन, किन नगर्ने ? तर अझै छ-आठ महिना म मुम्बई नै बस्छु । त्यसपछि हेरौं, के हुन्छ ? अहिले पनि मेरा केही चलचित्रको डबिङ बाँकी छ, त्यसैले केही साताभित्रै नेपाल जाने तयारीमा छु ।
Filed under: Interview | Tagged: sanchita luitel |
« रंगअनुरूप व्यक्तित्व यि हुन अमेरिकाका हट हट गर्ल »
jivan bhattarai, on May 20, 2010 at 4:44 pm said: